मेरो भागमा परेका प्रकाश दाहाल | Indrenionline.com
खबर लेख्दैछु त के भनौं र ? लतारिँदै छु । बिहान उठ्नुबित्तिकै सुनेको खबर । अपुष्ट खबर, पुष्टि गर्नै गाह्रो । पुष्टि भएपछि पत्याउनै गाह्रो… ।
प्रकाश दाहालले पोष्टिएका यी तस्वीर र क्याप्सनहरु अब सम्झनामा मात्र ।
दशैंको शुभकामना ।
घोराहीको मेवाड कफीहाउस अगाडि प्रकाश दाहालसँग । यो फोटो अब सम्झनामा मात्र सीमित रह्यो । तस्वीर : कुलदीप न्यौपाने
प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बैनी बिना मगरसँग ।
प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की भएको अवस्थामा दाङका तर काठमाडौंमा बस्ने एकजना पत्रकारले लेखेको स्टाटसको स्क्रिनसट पठाएर प्रकाशले भने, “उहाँलाई एक महिना मसँग संगत गर्न लगाइदिनुस् । एक महिनाको संगतमा म उहाँले भनेजस्तै रहेछु भन्ने लाग्यो भने त्यतिबेला जति लेखे पनि लेख्नुहोला । अहिलेचाहिँ फेसबुक र ट्वीटरका ती स्टाटस हटाउन भनिदिनु होला ।” मैले यी कुरा जस्ताको तस्तै स्टाटसवाला पत्रकारलाई सुनाइदिएपछि ती स्टाटसहरु डिलिट गरिए । लगातार मिडियाको कोपभाजनमा परे तापनि उनी आफू भने मिडियामैत्री नै थिए । भन्थे, “मैले गल्ती गर्छु भने लेख्नैपर्छ, लेखून् तर यहाँ त…. ।”
अचानक आएको आजको कुदिन ! स्तव्ध छु, निःशव्द छु र मर्माहत छु । अझै पत्यार लागेको छैन तिम्रो मृत्युको खबर । अहँ, नर्भिक हस्पिटलदेखि पेरिसडाँडा र आर्यघाटमा पुग्दासम्मका दृश्य र स्वयं प्रचण्डले दागबत्ती दिएपछि धुवाँ बनेर उडेका दृश्य हेरिसक्दा पनि यो मन तिम्रो मृत्यु भएको मान्न तयार छैन । मनले नमाने पनि हावासरी फैलिएको तिम्रो मृत्युको खबर यथार्थमा सत्य बनेर मेरोसामु उभिएको छ । एक्कासी परेको यो बज्रपातलाई सहने शक्ति प्रचण्ड परिवारलाई मिलोस् । मनले माने पनि नमाने पनि सत्यलाई स्वीकार गरेर भन्नै परेको छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जलि, अलविदा !